Britain: Magaca Ninka Soomaaliga ee loo xiray dilka Xildhibaanka Ingiriiska oo la shaaciyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Britain: Magaca Ninka Soomaaliga ee loo xiray dilka Xildhibaanka Ingiriiska oo la...
London (Halqaran.com) – Booliiska dalka Britain ayaa shaaciyay magaca nin Soomaali ah oo loo haysto dilkii Jimcihii la soo dhaafay loo geystay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka waddankaasi.
Cali Xarbi Cali ayaa la sheegay in loo xiray tuhunka ah inuu dilay xildhibaan David Amess. 25 jir-kan haysta dhalashada Ingiriiska asal ahaanse ka soo jeeda Soomaaliya ayaa lagu xiray goobtii lagu tooriyeeyay xildhibaanka.
Wuxuu hadda ku xiran yahay Ninkan Saldhigga Boliska ee Essex, halkaasi oo ay Su’aallo ku waydiin doonaan waaxda booliiska ee ka hortagga Argagixisada.
Booliiska ayaa laga yaabaa inay sii hayaan ninkan illaa Talaadada ka hor intaanay ku soo oogin dacwad, ama aanay sii dayn.
Sidoo kale, booliiska ayaa weerarkan u baaraya sidii dhacdo argagixiso, oo laga yaabo inay la xiriirto xagjirnimada Islaamiyiinta.
Ugu dambeyn, dilkan waa kii labaad ee loo geysto xildhibaan ka tirsan baarlamanka Ingiriiska sanadihii la soo dhaafay, kadib dilkii Jo Cox oo ka tirsanayd xisbiga shaqaalaha taasi oo la dilay bishii July 2016.
dilka Xildhibaan Ingiriis ah
Soomaali loo xiray